Faah Faahin Ka Soobaxaysa Sababta Kayntay In Dib loo Celiyo Diyaaradii qaadka Usitay Baardheere – STAR FM SOMALIA
Faah Faahin Ka Soobaxaysa Sababta Kayntay In Dib loo Celiyo Diyaaradii qaadka Usitay Baardheere
Waxa ay warar dheeraad ah ka soo baxayaan sababtii ka dambeysay in ciidamada Itoobiya ee ku sugan Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ay celiyaan diyaarad qaad u siday Degmadaasi, taasi oo ay lahaayeen ganacsato Somaliyed.
Diyaaradan amarka lagu celiyay, ayaa waxaa bixiyay Sarkaal ka tirsan ciidamada Itoobiya ee ku sugan Degmada Baardheere, kadib markii sida la sheegay Sarkaalkaasi ay isfahmi waayeen ganacsatadii u rarneyd qaadka.
Khadra Cabdi Shidane oo ah Haweenay ganacsato ah, diyaaradaasina u rarneyd ayaa sheegtay in Saraakiisha Itoobiya ee Degmada Baardheere ku sugan ay ugu yeereen xerada ciidanka inay ugu tagto, balse ay ka soo horjeesatay arintaasi.
Khadra waxa ay sheegtay Saraakiisha ciidamada Itoobiya inay ku wargelisay hadii ay wax uga baahan yihiin inay u soo maraan Maamulka Degmada, balse Ciidamada Itoobiya caro ay hadalkaasi ay ka qaadeen awgeed ay u celiyeen diyaadii qaadka u siday iyada.
Haweenaydaan ayaa sababta markii hore ciidamada Itoobiya ay ugu yeereen ku sheegtay inay tahay qof ka mid ah Ganacsatada qaadka inuu ku dacweeyay ciidamada Itoobiya, kadibna ciidamada Itoobiya ay u yeereen Khadra, iyaga oo daawanaya inay ku qaadaan kiiska dacwada ah.
Su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah ciidamada Itoobiya miyaa maamul ka ah Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo?
Gudoomiyaha arimaha bulshada Degmada Baardheere Xuseen Cabdi Xalane, ayaa ku eedeeyay ciidamada Itoobiya inay faraha la galeen howl aanan shaqadooda aheyn.
Wuxuu sheegay ciidamada Itoobiya inay Gobolka u joogaan la dagaalanka Ururka Al Shabaab, balse muhiim ay tahay inay faraha kala baxaan shaqooyinka maamulka Degmada Baardheere.
Ciidamada Itoobiya ayaa xilliyada qaar faraha la gala shaqooyinka Maamulka Degmada Baardheere, taasi oo muujinaysa inaysan tixgelinayn nidaamka Maamul ee Degmadaasi ka jira.
Xildhibaanada Baarlamaanka oo wada mooshin ka dhan ah Saldhiga Imaaraadka ee Berbera
Labo ruux oo ku geeriyootay Shil ka dhacay Muqdisho